အိန္ဒိယရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများရဲ့ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် မြန်မာရိုးရာ အတာသင်္ကြန် သံချပ်များ
အိန္ဒိယရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ၏ ၂၀၁၀ ခုနှစ် မြန်မာရိုးရာအတာသင်္ကြန်သံချပ်များ အချိန်မှီထွက်ရှိလို့ လာပြန်ပါပြီ။ အောက်ပါ လင့်ခ်များမှ တဆင့် Download ရယူပြီး နားသောတဆင်နိုင်ကြပါပြီ။
Credit to : အညာမြေ တမာနွေ
ယနေ့ ၂ နာရီအချိန် သတင်းရရှိသည့် အခြေအနေများအရတိုင်း (၇) တိုင်း၊ ပြည်နယ် (၇)ခုက ကိုယ်စားလှယ်များ ၊ အီးစီ၊ စီအီးစီ တို့၏ ယနေ့ ပါတီမှတ်ပုံတင်သင့် မတင်သင့် ကို ၀ိုင်းဝန်းဆုံးဖြတ် မဲပေးကြရာ ပါတီမှတ်ပုံမတင်ရေးကို ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် အပြတ်အသတ် ဆုံးဖြတ် အတည်ပြုလိုက်ကြောင်း ကြားသိရသည်။ ယနေ့အစည်းအဝေးတွင် ဦးအောင်ရွှေ တဦးမှအပ စီအီးစီ၊ စီစီ ၁၁၀နှင့် လူငယ်ငါးဦး စုစုပေါင်း ၁၁၅ ဦး တက်ရောက်အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယင်းအစည်းအဝေးတွင် ဦးဝင်းတင်က.. “ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မှတ်ပုံမတင်ဘူးဆိုရင် ပါတီအနေနဲ့ ခြေပြတ်မယ်.. လက်ပြတ်မယ်.. မှတ်ပုံတင်မယ်ဆိုရင်တော့ ခေါင်းပြတ်မယ်.. ခြေပြတ်တာ လက်ပြတ်တာ အတု လုပ် ပြီး အလုပ်ဆက်လုပ်လို့ရတယ်.. ခေါင်းပြတ်သွားရင်တော့ ခေါင်းအတုလုပ်လို့မရဘူး.. ”ဟု ပြတ်ပြတ်သားသား မိန့် ကြား ခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်အထိ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များ၊ လူငယ်များ နှင့် ပြည်သူလူထု ၅၀၀ ကျော်သည် အဖွဲ့ချုပ် ရုံးရှေ့ တွင် အခြေအနေကို စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိနေပြီး နအဖ ဘက်မှ လုံခြုံရေးများလည်း အများအပြား ၀န်းရံစောင့်ကြပ်လျက် ရှိနေသည်။ ယနေတက်ရောက်သူ အဖွဲ့ဝင်တဦးက…
“ကျမတို့ ပါတီ ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို ပြတ်ပြတ်သ…
ဆရာ ဦးအောင်းသင်း လူငယ်တွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရေးသားထားတဲ့ ရွက်နုတွေ ဝေစေချင်လို့ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးတင်ထားပေးတဲ့ စာပေလောက ကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ ဆရာဦးအောင်သင်းရေးသားတဲ့စာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်၊ လူလတ်ပိုင်းတွေကို တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း အထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာ ငြင်းဖွယ်ရာမရှိပါဘူး။ ခံစားပြီး ဆင်ခြင်ကြည့်ကြပါစို့။
ကျွန်တော်အသက် ၈၃ နှစ်ထဲ ရောက်နေပါပြီ။ ရွက်ဟောင်းကြီး ဆိုပါစို့။ ရွက်ဟောင်းကြီးဆိုတော့ ကြွေရက်ကလည်း နီးလာပြီပေါ့။ ရွက်ဟောင်းတွေ ကြွေရင် ရွက်သစ်တွေဝေမှ သင့်ပါလိမ့်မည်။ ရွက်ဟောင်းကြွေလျက် ရွက်သစ်မဝေလျှင် ထိုသစ်ပင်မှာ ခြောက်သယောင်းသွားရပေ လိမ့်မည်။ သို့သော် လူ့လောကတည်းဟူသော သစ်ပင်ကြီးက ဘယ်တော့မှ အသေခံ ခြောက်သယောင်း မသွားပါ။ ရွက်သစ်တွေ တဝေဝေ ဖြစ်နေတတ်မြဲ ဖြစ်ပါသည်။ လောင်းရိပ်မိသော၊ အပူလောင်သော ရွက်နုတွေသာလျှင် နုလျက်နှင့်မဝေနိုင်ဘဲ ကြွေသွားရ တတ်မြဲ ဖြစ်သည်။ “ရွက်နုကြွေ” ပေါ့။
ထိုကဲ့သို့ ရွက်နုကြွေမဖြစ်ဘဲ ရွက်နုတွေဝေစေချင်သောကြောင့် မျိုးဆက်သစ် အတွက် ခွန်အားသစ် စာပေတွေကို ကျွန်တော် ကြိုးစားပမ်းစား ရေးနေမိသည်။ သို့သော် ကျွန်တော့်စာတေ…
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂ (Burma Media Association) စာနယ်ဇင်း ညီလာခံမှာ ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်က စီစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ "မြန်မာ့နိုင်ငံရေး နဲ့ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ" ရုပ်မြင်အစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း ၅ ပိုင်းရှိပြီး Playlist အနေနဲ့ တင်ပြထားပါတယ်။
Credit to: VOA Burmese
Sharing: Invitation for Resistance Day Demonstration in UK
Warm greeting to you all. We would like to cordially invite you to join with us to commemorate Burma Resistance Day and to protest against illegitimate military regime on 26 March 2010 (Fri) in front of the Burmese military regime's embassy. Your presence will be highly honoured and looking forward to seeing you all.
Please forward this message to everyone who concern Burma. Thank you very much and looking forward to seeing you all.
+44 208 493 9137 begin_of_the_skype_highlighting +44 208 493 9137 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting +44 208 493 9137 end_of_the_skype_highlighting
Invitation for Fundraising Event by Karen Community Association - Sheffield
We the Karen Community Association (KCA) would like to invite you all toafund-raising event on 20th March 2010.
In April 2005 the Karen Community Association UK was started by Karen people, who had previously fled from persecution and oppression by the Burmese regime because of their beliefs, ethnicity and political practice.
During February this year we heard news about the repatriation of 3,000 ethnic Karen refugees, who were forced to flee into Thailand in June 2009. The refugees have been kept in squalid conditions in two temporary camps, Nong Bua, (also called No Bu), and Mae U Su, in Tha Song Yang close to the Thailand-Burma border. On February 5th, 13 people were sent back into Burma before the UNHCR and other NGO’s arrived. Now the Royal Thai Government and local and military representatives have officially stated that they will not force people to return.
We the KCA-UK members are very concerned about our people. We also recently received the news about increased …
- Burma is one of the poorest countries in the world.
- It is ruled by one of the world’s most brutal regimes, guilty of every possible human rights violation.
- It also has one of the worst records of religious persecution in the world.The people of Burma need our prayers.
Daw Aung San Suu Kyi, the democratically elected leader of Burma who has spent fourteen of the last nineteen years under house arrest, asked Christians around the world to pray for Burma, which is why the Global Day of Prayer for Burma was created. Help answer her call by taking part in the Burma Day of Prayer on 13 March 2010.
Join CSW supporters and staff at the Emmanuel Centre in London for an exciting and challenging day of prayer – and have the unique opportunity to participate in contemporary Burmese worship and hear firsthand accounts from victims of persecution in Burma.
If you can’t attend the London event, why not use CSW’s free resources to hold your own prayer event for Burma? The people of Burma would be so…
Via: Waihnin Pwint ThonDear All,
I would like to invite all of you to the birthday celebration of my father. He will be 44 in March, this year. However, he has to spend his birthday in small prison cell with nobody around him.
He used to hold the prayers event to pray for all the people in Burma on his birthday before he was arrested. This year, he cannot hold any event and do celebration on his birthday. As his daughter, I would like to continue his works and fulfill his wishes.
I would like to invite all of you to come and pray together for all the people of Burma for their freedom and peace. I would like to request all of you to wear white color shirt or blouse as remembering the white campaign that was led by my father with his friend of 88-generation students group.
Thank you so much indeed and looking forward to seeing you all.
St. Ethelburga’s, Centre for Peace and Reconciliation.
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂလာနေ့ (၈.၃.၂ဝ၁ဝ) က Oxford မြို့ Oxford Town Hall တွင် ကျင်းပခဲ့သော Oxford Internation Women's Festival သို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရန် ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်နှင့် အတူ လန်ဒန်မှမိတ်ဆွေများလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ လန်ဒန်မှ နေ့လည် ၁ နာရီခန့် ထွက်လာကြပြီး နေ့လည် ၃ နာရီခန့်မှာ Oxford သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားသည် ညနေ ၆ နာရီမှ စမည်ဖြစ်သော်လည်း ပြင်ကြဆင်ကြရင်း ညနေ ၆ နာရီသို့ အချိန်ကုန်မှန်းမသိကုန်ပြီး ရောက်ရှိသွားပါတယ်။
ဒီနှစ်ပွဲရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ Oxford Internation Women's Festival မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို လက်ခံကျင်းပခွင့်ပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သမိုင်းမှာ Oxford မြို့လေးဟာ သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုအနေနှင့် ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ ပြောမယ်ဆိုရင်လည်း မှားမည်မထင်ပါ။ ထိုပွဲကို နှစ်စဉ် ၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ မှ ၁၄ မတ်လအထိ ကျင်းပပြီး မတ်လ ၈ ရက်နေ့ကို International Women's Day အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ပွဲတော်မှာ အမျိုးသမီးများနှင့် ပက်သက်သော စာပေ၊ ဂီတ၊ ပြပွဲ နှင့် workshop များ စသည်ဖြင့် ထည့်သွင်းကျင်းပကြပါတယ်။ နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး ထင်ရှားကျော်ကြား…
မန္တလေး နှစ် (၁၅ဝ) ပြည့်ပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မန္တလေးအမျိုးသားကဇာတ်ရုံတွင် တင်ဆက်ခဲ့သော တစ်ခန်းရပ်ပြဇာတ်တစ်ခုပါ။ ဝါရင့်အနုပညာရှင်ကြီးများ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတွက် ဟာသရသမြောက်တဲ့အပြင် လက်ရှိခေတ်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတာလေးတွေကိုပါ တိုက်ရိုက် ထင်ဟပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ မန္တလေးသူ၊ မန္တလေးသားတွေ (သို့) အထာသိတဲ့ လူတွေဆိုရင်တော့ ဒီပြဇာတ်လေးက ပိုပြီးရီရမယ်ဗျ။ သြော် ... မန်းစလေးလား ... မန္တလေးလား
Credit to: Ko Moe
In the same month, the Burmese troops firedamortar bomb into an area of Internally Displaced People (IDPs) in Mutraw (Papun) D…
The 63rd Anniversary Mon National Day will fully be celebrated in London, in aspect of presenting the culture of Mon people in the world arena. Generation of Mon Society UK will take the responsibility of holding the event with full willingness. The event is to be held inafew weeks later than the actual designated date, in order to provideasmooth and convenient performance in overall channel. The performance will includes auspicious Mon National Day Speeches, cultural dances, live music band and comedy joke show (Anyeik). Moreover Food Fayre will also be part of the supplement program that will raise donation fund for the humanity needs in the border area of Myanmar (Burma).
We would like to invite all representatives from different community, organizations, other ethnic backgrounds and friends and families of our members to the event. The occasion will be held as follows withaFREE ENTRY:
Event Title : 63rd Mon National Day London
Date : : 6th March, 2010( Saturday )
Time : : 17:00 …
မြနန္ဒာလို့ လူသိများနေပေမဲ့ တကယ့် နာမည်အမှန်က မန်းတောင်ရိပ်ခို ဖြစ်ပါတယ်။ ကြာတော့လဲ ကြာခဲ့ပြီလေ။ ဒီ မန်းတောင်ရိပ်ခို သီချင်းကို စပြီး ကြားဖူးတာက ကျွန်တော် လေးတန်းကျောင်းသား ဘဝမှာပေါ့။
ကျွန်တော့်ဇာတိမြို့က အညာမှာ။ အဲဒီတုန်းက ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဘုရားပွဲရှိရင် ကွင်းပြင်ကြီးထဲမှာ ပိတ်ကားကြီး ထောင်ပြတဲ့ ရုပ်ရှင် အလကားကြည့်ရတယ်။ ကြော်ငြာ အတိုအစတွေလဲ ပါတယ်။ ပွင့်ကောင်း ငါးပိ ငံပြာရည် ကြော်ငြာတို့၊ ကာတွန်းဦးဗကလေးရဲ့ ကာတွန်းကိုလဲ ကြည့်ရတယ်။ ဘုရား ထီးတင်ပွဲ သတင်းတို့၊ သတင်း တိုလီ ထွာလီတွေလဲ ပါတယ်။
အသေးစိပ် ကောင်းကောင်း မမှတ်မိတော့ပါ။ မှတ်မိနေတာက အဆိုတော် ဦးအံ့ကြီး နဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေ သီချင်းဆိုကြတဲ့ …
Venue: Oxford Town Hall , St Aldate’s, Oxford , OX1 1BX
6.30 pm – 7.30 pm sale of Burmese Cuisine
7.30 pm – 9.30 pm the main event.
Academic Speaker - Daw Nita Yin Yin May (OBE) (BBC Burmese Service) will deliver the speech about the Life of Iconic Lady Aung San Suu Kyi.
Ms. Vicky Bowman (the first woman British Ambassador to Burma,2002-2006), currently Director Global & Economic Issues (job share) at the Foreign & Commonweath Office will speak about the situation of Women in Burma.
Miss Wai Hnin (BCUK) will speak about the Burma History & Culture.
Film documentary, Traditional Dance & Performance.
Entrance: £6, Concessions £4.50 (Booking recommended)
Wheelchair access: Limited to4wheelchairs (Entrance 20 metres to left of main entrance)
All Welcome (Everyone could wear your lovely traditional costune freely)!
You can contact in advance to Ma Kyu if you want to follow with the Coach please. Coach will leave from Victoris Coach station.
A celebration in recognition and support o…